Howlgal lagu qab qabtay ku dhawaad 10-ruux oo ka dhacay Gaalkacyo | raascasayrmedia.com
← Baaq ay soo saareen jaaliyada Raascasayr State Of Somalia ee dalka Cumaan
Booliska Kenya oo gacanta ku dhigay dad lagu sheegay Shabaab →
Howlgal lagu qab qabtay ku dhawaad 10-ruux oo ka dhacay Gaalkacyo
Howlagalo lagu soo qab qabtay ku dhawaad 10-qof ayaa ciidamada booliska Puntland waxaa ay ka sameeyeen Woqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug.
Kadib markii habeenimadii xalay kooxo hubaysan Magaalada Gaalkacyo ay ku dileen Sarkaal ka tirsanaa dhulka Soomaalida eeEthiopiaay Maamusho ayaa maanta Ciidamada booliska ee Puntland waxaa ay mar kale howlgalo balaaran ka sameeyeen xaafado ka tirsan Woqooyiga Gaalkacyo.
Xaafadaha ay Ciidamada booliska howlgalada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah Xaafadda Siinaay iyo Israac oo ka tirsan Woqooyiga Gaalkacyo ee gobolka Mudug halkaasi oo ay kusoo qab qabteen 8-ruux oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyaan falalka aman dari ee ka dhacay Magaaladaasi.
Ciidamada ayaa la sheegay in dadkii ay qab qabteen qaar ka mid ah sii daayeen kuwasi oo la tilmaamay inay lagu waayay wax dambi ah halka kuwa kalena la sheegay inay wali gacanta ugu jiraan booliska Gaalkacyo.
Taliyaha Ciidamada Booliska gobolka Mudug ee Puntland C/rashiid Cadceed ayaa waxaa uu sheegay in amaanka Magaalada Gaalkacyo uu yahay mid sii xumaanaya hase ahaatee waxaa uu sheegay in ciidamada Puntland ay adkayn doonaan guud aahaan amniga Woqooyiga Gaalkacyo.